Daybọchị Mba Nile nke Nwa Afrika: Jikọọ na Kpamkpam!
Home » Akwụkwọ ndị njem nlegharị anya nke Africa » Daybọchị Mba Nile nke Nwa Afrika: Jikọọ na Kpamkpam!
Ndị njem nlegharị anya nke Africa chọrọ ka ụwa sonye na pati ahụ. Oge mmemme a bụ maka ụbọchị mba ụwa nke ụmụaka Africa. O bu ezigbo mkparita uka ya na ndi isi, ma ya na ndi otu oke okwu, umuaka Africa - na afo a o kariri.
Na-akanye Daybọchị Mba Internationalwa nke Nwa Africa, nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa ga-atụle nsogbu ndị na-abịanụ na-eche ụmụaka Africa ihu na atụmatụ n'ọdịnihu iji zụlite agụmakwụkwọ maka ụmụaka n'Africa na ọdịnala iji gaa agụmakwụkwọ.
Iburu ọkọlọtọ nke "getchebe Childrenmụaka na Ndị Ntorobịa na Mmepe Njem Nleta nke Africa" ​​Tourlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem Nleta n'Africa kwadoro mkpọsa ikike ikike agụmakwụkwọ na ụmụaka n'Africa. Mkparịta ụka a ga-eme na echi, June 16 na akara ngosi ihe omume ahụ.
Ihe omume a bu mkparita uka na ememe. Onye ọ bụla chọrọ isonye na ihe ọ bụla nwere ike ịme nke a n'ịga https://africantourismboard.com/international-day-of-the-african-child/ ma denye aha.
A na-ahazi emume a n'okpuru nduzi nke Abigail Olagbaye, onye nnọchi anya ATB na Nigeria. Abigail na-arụsi ọrụ ike iji mee ihe omume a dị mkpa.
Onye isi oche ndị njem nlegharị anya n'Africa bụ Maazị Cuthbert Ncube kwuru na ozi ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 60 nke ndị bi n'Africa erughị afọ 25, na-eme ka Africa bụrụ kọntinenti nke ọdụdụ n'ụwa niile maka amụma ọnụ ọgụgụ igwe mmadụ nke United Nations.
Ncube kwuru na ndị ntorobịa Africa bụ nnukwu akụ na ụba na-eto eto na kọntinent.
Ọnụ ọgụgụ mmadụ na-enye nnukwu ikike, mana ihe dịka pasent 14 nke ndị ọrụ na-eche enweghị ọrụ ihu. Nke a enweghị ike ịbụ azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ ”, Ncube kwukwara na ozi ya.
Onye isi oche ATB gara n'ihu kwuo na ọ bụ oge kwesịrị ka ndị isi Africa ga-ebili ma bụrụkwa ndị nlereanya ma mara nka nke nnyefe nke ihe ọmụma, nka, na nka nke ịme mkpebi na nhọrọ dị mma.
“Mmụọ nke inwe afọ ojuju ga-emerịrị site na agụụ nke ide ihe n'obi ndị na-eto eto, ọchịchọ ibi ndụ ka ukwuu karịa agụụ na ọchịchọ nke taa. Enwere echi ibi ndụ na taa iji kpebie ”, Ncube kwuru.
Na June 16 kwa afọ, ndị gọọmentị, ndị na-abụghị ndị gọọmentị (NGO), ụlọ ọrụ mba ụwa na ndị ọzọ nwere oke ọnụ na-agbakọ iji kwurịta ihe ịma aka na ohere ụmụaka na-eche n'Africa na mmezu nke ikike ha.
Ọ bụ ụbọchị ahụ n'Africa na ụwa ndị ọzọ na-echeta ogbugbu nke ọtụtụ narị ụmụaka Africa bụ ndị jikọtara n'okporo ámá dị na Soweto, South Africa, na-achọ ikike nha anya na agụmakwụkwọ.
Childrenmụaka ahụ pụtara n'okporo ámá nke Soweto n'otu ụbọchị ahụ na 1976, na-adaba na kọlụm maka ihe karịrị ọkara-mile n'ogologo, na-eme mkpesa na-adịghị mma nke agụmakwụkwọ ha ma na-achọ ikike ha ka a kụziere ha n'asụsụ ha.
Ndị uwe ojii gọọmentị mbụ nke ọchịchị apartheid gbagburu ọtụtụ narị ụmụ akwụkwọ.
ATB na-arụkwa ọrụ iji dọta ụmụaka Africa ka ha gaa njem mmụta na mba ha, wee gaa mba ndị ọzọ dị n'Africa na-abụghị mba nke ha.
Site n’itinye omenaala nke ime njem site na mmuta, umuaka nke Africa ga abu ezigbo ndi-isi maka echi na ndi ndu n’emeghari njem site na itinye ego, mmuta, na deliverynye ezigbo oru.
Gha mkpụrụ nke njem n'etiti ụmụ akwụkwọ ga-amị mkpụrụ nke mmepe nke njem nlegharị anya nke ụlọ, mpaghara na intra-Africa maka kọntinent ahụ iji nwee ọganihu dị ka ebe ndị njem nleta na-eduga n'ụwa, na-echekwa akụnụba anụ ọhịa ya, ebe akụkọ ihe mere eme na ebe nketa ya na ọdịbendị bara ụba n'etiti ndị Africa. .
Ewezuga Maazị Ncube, ndị ọkà okwu ndị ọzọ ama ama gụnyere Dọkịnta Walter Mzembi, onye bụbu mịnịsta Zimbabwe na-ahụ maka njem, Allan St. Ange, onye bụbu minista Seychelles maka njem.
Ndị njem njem njem nke Africa, nke dị na South Africa, na-ere ma na-akwalite Africa dị ka ebe njem nleta na mkpagharị maka nnwere onwe nke ndị Africa gafee kọntinent ahụ, yana ị na-arịọ maka njem dị mfe nke ndị ọbịa gafere mba dị iche iche n'Africa.
More na njem nlegharị anya nke Africa na otu esi esonye na nzukọ a ga www.africantourismboard.com
Ezigbo Job Korea!
Planesgbọ elu abụọ nke njem na-ada na Russia